Mawiricheya Akanaka | KarmanHealthcare.com
Nemichero yakawanda uye zvigadzirwa kunze uko zvakaoma kuziva kuti ndeipi mavhiripu izvo zvakanaka. Karman anokubatsira iwe kuwana mavhiripu izvo zvakanaka kuburikidza nemakore mazhinji ekutsvaga uye kusimudzira.
Yedu ruzivo uye kusarudzwa kwechigadzirwa zvinopa vatengi nesarudzo yakafara ine kukosha kwakanyanya. Rudzi rwe wiricheya izvo zvakanaka zvinogona kunge zvisiri zvemunhu wese. Munhu wega wega ane zvavanoda uye vanokoshesa chigadzirwa zvakasiyana kubva kune mumwe.
Ndeupi musiyano uripo pakati peiyo S-ERGO furemu uye echinyakare pekugara system?
Yedu S-Rakaumbwa Seating System inopa zvakawanda zvakanaka pamusoro peyakajairwa wiricheya yemawoko chigaro. Haingori chete kuti kumanikidzwa kunogoverwa zvakaenzana pamakumbo nekumashure, inopawo pekugara pakadzika uye inodzivirira kumberi kutsvedza.
Nyika yekutanga S-Yakaumbwa ergonomic zvigaro yakagadzirirwa zvakananga kunyaradzwa uye ergonomics. Iine anopfuura makumi maviri nemaviri patent uye yakatangwa seGlobal Chigadzirwa, ichi chigadzirwa chakasarudzika chinokwanisa kudzikamisa kumanikidza, kudzikisira kutsvedza uye kusimudzira kumira kwakanaka. Ese edu maS-ERGO mafuremu ANOEDZWA. Dambudziko iri rakasangana neUltralight Kurema, Ergonomics, Nyaradzo, uye Kuchengeteka mupfungwa uye neyakaguma chigadzirwa ichigadzika bhaa yepamusoro unhu zvinogoneka. Dzidza zvimwe zvakasarudzika mamakushini anorapwa ne AEIGIS® kupa iyo anti-microbial yakavharwa zvigaro sisitimu.
PaKarman, isu tine anopfuura zana mamodheru echinyorwa mavhiripu kusarudza kubva. Kazhinji, kana iwe uchikwanisa kuzvikurisa mune wiricheya, iwe uchazoda iyo yakanyanya kureruka kugadzikana wiricheya inowanikwa. Dzidza zvakawanda nezve ese mapoka aripo wobva wasarudza nehuremu hwechigadzirwa uye bhajeti. Heano mamwe mapoka uye ruzivo rwekuongorora kwako. Tinovimba kuti izvi zvichakubatsira iwe kuti uwane mavhiripu izvo zvakakunakira iwe.
senga mavhiripu ndiyo sarudzo yakanaka yekutakura mumwe munhu kuenda uye kubva kunzvimbo dzaungade kufamba nadzo. A chokufambisa wiricheya inowanzo derera uye kupenya kupfuura a wheelchair yakajairwa, Ichiita sarudzo yakanaka yezvipingamupinyi zvakaomarara uye nzira dzakamanikana. Pane misiyano pakati pemagumo edu epamusoro Tsaona Yakaedzwa S-ERGO akateedzana kutakura mavhiripu uye zvakare hupfumi zvigadzirwa giredhi. Dzimwe sarudzo huru dzinosanganisira yedu ERGO LITE uye S-115TP. Isuwo tine a wiricheya yakagadzirirwa kufamba, TV-10B.
Heino urongwa hwe mavhiripu izvo zvakanaka kuchikamu chekufambisa: Tinokurudzira iyo Ergo Ndege-TP uye iyo LT-1000 modhi. Ndokumbira ushanyire yedu chokufambisa wiricheya chikamu chechigadzirwa vhidhiyo kuti uwane rumwe ruzivo. Kuwana kurudyi wiricheya inokosha. Ndokumbira utore nguva yako kutenga kuchitoro kana kubata mutengesi. Kumbira nyanzvi.
Yakawanda yakaenzana uremu mavhiripu inotanga pamapaundi makumi matatu nemana, mumwe chiyero chehuremu chewiricheya sarudzo hombe kana iwe uchida a wiricheya izvo hazvingashandiswi kakawanda; kazhinji maawa matatu kana mashoma pazuva uye nekuchinja kusingawanzo kuitika. Yedu yakazara sarudzo inowanikwa kubva kune akanyanya mhando mamodheru ane akamisikidzwa legrests uye armrests kune mavhiripu izvo zvine sarudzo yekusimudza magaro emakumbo uye mabhuremu anobviswa.
Kune zvakare mamodheru ane zvimwe zvekushandisa zvekusimudzira wiricheya yako. Maputi efuro uye / kana Gel Makushoni kupa kune imwe nyaradzo. YeChipimo Chehuremu Chikamu, mavhiripu izvo zvakanaka ingave yedu LT-800 modhi. Ndokumbira ushanyire yedu chokufambisa wiricheya chikamu chechigadzirwa vhidhiyo kuti uwane rumwe ruzivo. Zviyereso zvakajairika zvakajairika. Unogona kuona iyi mhando ye wiricheya kwose kwose.
Nemahuremu ari pakati pe25-34 mapaundi, yedu isina kurema wheelchair isarudzo huru kana iwe uchida a wiricheya iyo inowanzo shandiswa, kana iwe uchida sarudzo dzakasarudzika, kana kana iwe uine moyo wako wakaiswa pane yakatarwa furemu uye / kana upholstery ruvara musanganiswa. Ichi chikamu chinozvivhara zvese, zvine lightweight mavhiripu pamakwikwi emitengo.
izvi mavhiripu kupa zvimwe zvingasarudzwa uye isu tinowanzokurudzira kuti kuenzanisa kuitwe nedanho rinotevera kumusoro chikamu chiri chedu ultralight uremu mawiricheya uko kwekupedzisira kufamba zvishandiso uye maficha ari pakanyanya kwazvo. mavhiripu izvo zvakanaka kuchikamu ichi zvingave zvedu 802-DY kana LT-980 mhando. Ndokumbira ushanyire yedu chokufambisa wiricheya chikamu chechigadzirwa vhidhiyo kuti uwane rumwe ruzivo.
Ichi ndicho chikamu che mavhiripu panogara zvakanakisa zvepamusoro. ne wiricheya zviyero zvakaderera kunge 14.5 mapaundi uye inowanikwa mune zvese zviri zviviri S-ERGO uye zvakapusa mhando dzakasununguka dzakasununguka, kurema kwekupedzisira wiricheya ndeyemushandi wenguva yakazara uyo anoda kushanda uye kune avo vanoda kureruka wiricheya zvinogoneka kuve nyore kwekuzvishingisa uye kutakura.
Muchikamu ichi, iwe unenge uine huwandu hwezvinhu zvisati zvawanikwa pane chero vakwikwidzi senge standardize tsaona bvunzo pa S-ERGO mhando uye matani e sarudzo uye zvishongedzo isina kupihwa pane mamwe mabhesi muzvikamu wiricheya Zvisarudzo. mavhiripu izvo zvakanaka kuchikamu ichi zvinogona kunge zviri zvedu S-ERGO nhevedzano. Chero cheizvi mavhiripu inofanirwa kuiswa mune yako yepamusoro zvinyorwa zve mavhiripu izvo zvakanaka.
Our ERGO ATX inopa yakanakisa musanganiswa we wiricheya maindasitiri ekugadzira. Iyi nzira inosanganisira asi haina kuganhurirwa kune yakanyanya kugadziriswa, kuomarara, Ultra isina kuremerwa, kunyaradza, kupeta, chimiro uye kuita kwakanyanya.
Yedu Ultra isina kurema wheelchair chikamu chinotora zero kubvumirana nedhipatimendi redu reR&D kusundira matekinoroji ekupedzisira ekugadzira uye kugona uye kuadzosera kwauri chaiko mumigwagwa. Yechikamu ichi, yedu ATX ndiyo yekutanga mutsara kumusoro uye iri chokwadi iyo mavhiripu izvo zvakanaka sarudzo yepamusoro.
Kudzokera kumashure kana kuti zvimwe kuzivikanwa se "musana wepamusoro" wiricheya sarudzo hombe kune avo vanoshandisa yakawanda yenguva yavo mu wiricheya sezvo ichipa dzimwe nzvimbo dzekugara. Uye a kurereka wiricheya inopa kumwe kumisikidza uye kumanikidza kuregererwa kune avo vari kuda kumanikidzwa kumanikidzwa kwekushandisa kwenguva yakareba kwea wiricheya.
Ose maviri mapoka edu akanyatso kuderedza huremu hwevatsigiri vakwikwidzi saka ramba uchifunga kana uchitenga pamutengo. mavhiripu izvo zvakanaka kune iyi inogona kuve yedu VIP kana MVP modhi. Ndokumbira ushanyire yedu chokufambisa wiricheya chikamu chechigadzirwa vhidhiyo kuti uwane rumwe ruzivo.
Yedu Bariatric wiricheya ine yakakwira huremu chivharo chemazana mapaundi mazana, idzi inorema basa mawiricheya inogona kugara chero chero mushandisi ane yakanyanya chigaro upamhi of 30 ″ paupamhi. Karman anotakura yakazara yakazara ye basa rinorema mavhiripu, kubva pane zvemari bariatric kutakura mawiricheya, kuti yakaoma zvikuru-inogadziriswa / echinyakare mamodheru.
Isu zvakare tine akareruka uremu bariatric wiricheya muindasitiri yeayo chigaro upamhi uye chivharo chehuremu. mavhiripu izvo zvakanaka kune izvi zvinogona kukurudzirwa zvakanyanya seKM-8520. Iyo ndiyo yakareruka pane yayo uremu kapu chikamu. Ona nei nhasi. Fonera isu.
Ndakamira mune wiricheya ndechimwe chezvinhu zvine mukurumbira zvigadzirwa zvatakagadzira uye kugadzirwa mukuedza kwedu kubvumira iyo kufamba vasina simba kutora hupenyu hwavo kudzokera mumaoko avo.
Hatina kumira nekungobvumidza vanhu kumira mu wiricheya; isu takaita kuti ive yemakwikwi zvakanyanya mutengo chigadzirwa muchikamu chayo kutyaira hupfumi kupinda mazuva ese imba inobata. Verenga zvimwe pane zvese zvinobatsira, masosi emari, uye sarudzo dzemari kana iwe uchifarira yako wiricheya kubatsira iwe kumira.
Kana usati wawana mavhiripu izvo zvakanaka chete kwauri, ndapota taura nesu nhasi. Tichaita zvaunoda uye nekukubatsira iwe chero patinogona. Icho chinangwa chedu kukubatsira iwe kuti uwane mune yakakwana wiricheya izvo zvinokubatsira iwe kuti, "Karman anoita mavhiripu izvo zvakanaka, pamwe zvakatokwana ”.